အိမ်ထောင်တစ်ခုမှာ ငွေရှာရုံနဲ့ တာဝန်ကျေပြီမထင်ပါနဲ့….စကားတစ်ခွန်းက လက်ဆောင်တစ်ခုထက် ပိုတန်ဖိုးရှိပါတယ် -
အိမ်ထောင်တစ်ခုမှာ ငွေရှာရုံနဲ့ တာဝန်ကျေပြီမထင်ပါနဲ့….စကားတစ်ခွန်းက လက်ဆောင်တစ်ခုထက် ပိုတန်ဖိုးရှိပါတယ်
By : Wordpress Myanmar
Tags: life style, အချစ်ရေး
အိမ်ထောင်တစ်ခုမှာ ငွေရှာရုံနဲ့ တာဝန်ကျေပြီမထင်ပါနဲ့….
စကားတစ်ခွန်းက လက်ဆောင် တစ်ခုထက် ပိုတန်ဖိုးရှိပါတယ်
မိန်းမ ရော့ မင်းကြိုက်တာဝယ်၊ ကြိုက်တာ သုံးဆိုတဲ့ စကားထက်…. မိန်းမ အပြင် အတူသွားကြမယ်လေ ပြင်ဆင်လိုက်၊ ဘာလိုချင်လည်း လိုက်ဝယ်ပေးမယ် ဆိုတဲ့၊ စကားအသုံးပြုမှုလေးက ပိုနွေးထွေး ကျေနပ်စေရတာပါ။
မိန်းမ စားနှင့်ကွာ ဝမ်းမှ မဆုံတာဆိုတဲ့၊ …စကားထက်….. မိန်းမ ခဏတော့စောင့်ပေးနော်၊ ဗိုက်ဆာပေမယ့် အလုပ် မပီးသေးလို့ပါဆိုတဲ့၊ စကားအသွားအလာလေးက ပိုစိတ်ကျေနပ် စေရတာပါ။
မိန်းမ အိမ်အသုံးစရိတ်က ကုန်လှချည်လားဆိုတဲ့၊…. စကားထက်……. မိန်းမ ကုန်ဈေးနှုန်း အခြေအနေ ဘယ်လိုလဲ၊.. လောက်အောင် ချင့်ချိန်ဝယ်ကြည့်ပေါ့ကွာ…မလောက်ရင် ပြောပေါ့ဆိုတဲ့၊
စကားလုံးလေးတွေရဲ့ ချုပ်ထိန်းသွားမှုက ပိုမလာတဲ့ အသုံးစရိတ်နောက်မှာ စိတ်သက်သာရာ ရစေတာပါ။
မိန်းမ အချေအတင် မဖြစ်ချင်ဘူးကွာဆိုတဲ့ စကားထက်….. မိန်းမ ဘာအလိုမကျတာ ရှိလည်း … ညှိနှိုင်းကြမယ် ပြောကြည့်ဆိုတဲ့ ၁၀မိနစ်စာ … အချိန်ပေး လမ်းဖွင့်မှုက ပိုအကျိုး သက်ရောက်စေတာပါ။
မိန်းမ ပင်ပန်းတယ်ကွာ .. အဆင်ပြေပြေ နေရအောင်ဆိုတဲ့ စကားထက်….. မိန်းမ ဒီနေ့တော့ ဘယ်လုပ်ငန်း ဘယ်အကြောင်းအရာမှာ အဆင်ပြေတယ် မပြေဘူးဆိုပီး …
သူငယ်ချင်းနဲ့ ပြောသလို ရင်ဖွင့်ချ ပြောပြလိုက်တာက… နှစ်ဦးနှစ်ဖက် စိတ်အဖုအထစ် ပြေလျော့စေတာပါ။
မိန်းမ ပြင်ပြင်ဆင်ဆင် နေစမ်းပါဆိုတဲ့.. စကားထက်….. မိန်းမနေကောင်း ကျန်းမာရဲ့လား၊ ဘာတွေ စိတ်တိုင်းမကျတာ ရှိလည်းလို့ တစ်လမှာ တစ်ကြိမ်လောက် မေးလိုက်ရင်ကို …
စကားများရန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ .. မရှိသလောက် နည်းပါးလာမှာပါ။
မိန်းမသားတိုင်းက ခင်ပွန်းဝေယျာဝစ္စ၊ .. သားသမီးဝေယျာဝစ္စ၊ မိဘရှိရင် မိဘဝေယျာဝစ္စ၊ အိမ်မှုကိစ္စ၊ အကုန်တာဝန်ယူ လုပ်ကိုင်နေရတာမို့
ငွေရှာရုံနဲ့ တာဝန်ကျေပီမထင်ပါနဲ့၊… ပြည့်စုံအောင် ထားပေးနိုင်ရုံနဲ့ ပြီးမြောက်ပီ မထင်ပါနဲ့၊ လိုလေသေးမရှိ ဖြည့်ဆည်းပေးရုံနဲ့ မလိုအပ်တာ မရှိတော့ဘူး မထင်ပါနဲ့။
စကားတစ်ခွန်းက လက်ဆောင်တစ်ခုထက် ပိုတန်ဖိုးရှိပါတယ်၊
စကားက အားဖြစ်စေတာ နေရာအတော်များများမှာမို့ ကိုယ့်မိသားစု အေးချမ်းမှုဟာ ကိုယ့်စကား တစ်ခွန်းပေါ် မူတည်နေတာ မေ့မထားပါနဲ့။
ကိုယ်ပင်ပန်းသလို တနေကုန်မနားတမ်း … မျက်လုံးထဲ ချွေးဝင်သည်ထိ၊ ဝေယျာဝစ္စတွေ လုပ်နေရတဲ့.. မှီခိုဇနီးသည်ဟာ၊ သူ့ကိုပြန်မှီခိုနေသူတွေအတွက် သူ့အပြုံးဟာ အရေးပါတာမို့။
အိမ်ထောင်တစ်ခုမှာ….. ဘယ်သူက ဘယ်သူ့ကို ပိုပြုံးနိုင်စေနေတာလဲ?
ရွှေပိုးစက် မှ ချစ်သမီးလေး
အိမျထောငျတဈခုမှာ ငှရှောရုံနဲ့ တာဝနျကပြွေီမထငျပါနဲ့….
စကားတဈခှနျးက လကျဆောငျ တဈခုထကျ ပိုတနျဖိုးရှိပါတယျ
မိနျးမ ရော့ မငျးကွိုကျတာဝယျ၊ ကွိုကျတာ သုံးဆိုတဲ့ စကားထကျ…. မိနျးမ အပွငျ အတူသှားကွမယျလေ ပွငျဆငျလိုကျ၊ ဘာလိုခငျြလညျး လိုကျဝယျပေးမယျ ဆိုတဲ့၊ စကားအသုံးပွုမှုလေးက ပိုနှေးထှေး ကနြေပျစရေတာပါ။
မိနျးမ စားနှငျ့ကှာ ဝမျးမှ မဆုံတာဆိုတဲ့၊ …စကားထကျ….. မိနျးမ ခဏတော့စောငျ့ပေးနျော၊ ဗိုကျဆာပမေယျ့ အလုပျ မပီးသေးလို့ပါဆိုတဲ့၊ စကားအသှားအလာလေးက ပိုစိတျကနြေပျ စရေတာပါ။
မိနျးမ အိမျအသုံးစရိတျက ကုနျလှခညျြလားဆိုတဲ့၊…. စကားထကျ……. မိနျးမ ကုနျဈေးနှုနျး အခွအေနေ ဘယျလိုလဲ၊.. လောကျအောငျ ခငျြ့ခြိနျဝယျကွညျ့ပေါ့ကှာ…မလောကျရငျ ပွောပေါ့ဆိုတဲ့၊
စကားလုံးလေးတှရေဲ့ ခြုပျထိနျးသှားမှုက ပိုမလာတဲ့ အသုံးစရိတျနောကျမှာ စိတျသကျသာရာ ရစတောပါ။
မိနျးမ အခအြေတငျ မဖွဈခငျြဘူးကှာဆိုတဲ့ စကားထကျ….. မိနျးမ ဘာအလိုမကတြာ ရှိလညျး … ညှိနှိုငျးကွမယျ ပွောကွညျ့ဆိုတဲ့ ၁၀မိနဈစာ … အခြိနျပေး လမျးဖှငျ့မှုက ပိုအကြိုး သကျရောကျစတောပါ။
မိနျးမ ပငျပနျးတယျကှာ .. အဆငျပွပွေေ နရေအောငျဆိုတဲ့ စကားထကျ….. မိနျးမ ဒီနတေ့ော့ ဘယျလုပျငနျး ဘယျအကွောငျးအရာမှာ အဆငျပွတေယျ မပွဘေူးဆိုပီး …
သူငယျခငျြးနဲ့ ပွောသလို ရငျဖှငျ့ခြ ပွောပွလိုကျတာက… နှဈဦးနှဈဖကျ စိတျအဖုအထဈ ပွလြေော့စတောပါ။
မိနျးမ ပွငျပွငျဆငျဆငျ နစေမျးပါဆိုတဲ့.. စကားထကျ….. မိနျးမနကေောငျး ကနျြးမာရဲ့လား၊ ဘာတှေ စိတျတိုငျးမကတြာ ရှိလညျးလို့ တဈလမှာ တဈကွိမျလောကျ မေးလိုကျရငျကို …
စကားမြားရနျဖွဈတယျဆိုတာ .. မရှိသလောကျ နညျးပါးလာမှာပါ။
မိနျးမသားတိုငျးက ခငျပှနျးဝယြောဝစ်စ၊ .. သားသမီးဝယြောဝစ်စ၊ မိဘရှိရငျ မိဘဝယြောဝစ်စ၊ အိမျမှုကိစ်စ၊ အကုနျတာဝနျယူ လုပျကိုငျနရေတာမို့
ငှရှောရုံနဲ့ တာဝနျကပြေီမထငျပါနဲ့၊… ပွညျ့စုံအောငျ ထားပေးနိုငျရုံနဲ့ ပွီးမွောကျပီ မထငျပါနဲ့၊ လိုလသေေးမရှိ ဖွညျ့ဆညျးပေးရုံနဲ့ မလိုအပျတာ မရှိတော့ဘူး မထငျပါနဲ့။
စကားတဈခှနျးက လကျဆောငျတဈခုထကျ ပိုတနျဖိုးရှိပါတယျ၊
စကားက အားဖွဈစတော နရောအတျောမြားမြားမှာမို့ ကိုယျ့မိသားစု အေးခမျြးမှုဟာ ကိုယျ့စကား တဈခှနျးပျေါ မူတညျနတော မမေ့ထားပါနဲ့။
ကိုယျပငျပနျးသလို တနကေုနျမနားတမျး … မကျြလုံးထဲ ခြှေးဝငျသညျထိ၊ ဝယြောဝစ်စတှေ လုပျနရေတဲ့.. မှီခိုဇနီးသညျဟာ၊ သူ့ကိုပွနျမှီခိုနသေူတှအေတှကျ သူ့အပွုံးဟာ အရေးပါတာမို့။
အိမျထောငျတဈခုမှာ….. ဘယျသူက ဘယျသူ့ကို ပိုပွုံးနိုငျစနေတောလဲ?
ရှပေိုးစကျ မှ ခဈြသမီးလေး
ထိပ်ပြောင်သူအတွက် ၂ ပတ်အတွင်းဆံပင်ပေါက်နည်း
#Zawgyiဖြင့်ဖတ်ရန် ထိပ်ပြောင်သူအတွက် ၂ ပတ်အတွင်းဆံပင်ပေါက်နည်း ထိပ်ပြောင်သူ၊ ဆံပင်ကျွတ်လွယ်သူ၊ ဆံပင်ပါးသူများအတွက် အလွန်ထိရောက်ပြီး လွယ်ကူတဲ့ နည်းတခု ဖြစ်ပါတယ်။ ကြက်သွန်ဖြူ ၃-၄ တက်လောက် ယူပြီး အခွံခွာပြီး အလယ်က ထက်ခြမ်းခြမ်းပါ။ ပြီးရင် ခြမ်းထားတဲ့အပိုင်းကို ဦးရေပြား ဆံပင်ပါးတဲ့နေရာတွေ လိုက်ပွတ်ပါ။နာရီဝက်ခန့် ထားပြီး အုန်းဆီကို လက်နဲ့ လိမ်းပေးရမယ်။ အာနိသင်ကောင်းဖို့ vitamin E oil ၅ စက်လောက်ထည့်သင့်တယ်။ အုန်းဆီလိမ်းတဲ့အခါ ဆံသားအခြေကနေ အဖျားသို့ နှံ့အောင် လိမ်းပေးရမယ်။(ပုံမှန်အားဖြင့် ခေါင်းပြန်လျှော်ဖို့ မလိုပါ။အနံ့မခံနိုင်ရင်တော့ အုန်းဆီလိမ်းပြီး တနာရီကြာတဲ့အခါ ခေါင်းလျှော်သင့်တယ်) ကြက်သွန်ဖြူမှာmethylsulfonylmethane(MSM) ဆိုတဲ့ ဆာလဖာ ဓာတ်တမျိုး ပါတယ်။ သူက ဆံသားအခြေကု …
အသက် ၂၄ နှစ်ပြည့်ပြီး နောက်ပိုင်း လုံးဝ မလုပ်သင့်တော့တဲ့ အရာများ
အသက် ၂၄ နှစ်ပြည့်ပြီး နောက်ပိုင်း လုံးဝ မလုပ်သင့်တော့တဲ့ အရာများ ၁။ အပေါစားအဝတ်အစားတွေဝယ်တာကို ရပ်တန့်လိုက်ပါ လူငယ်ဘာသာသဘာဝ ပြောင်းလဲနေတဲ့ဖက်ရှင်ရေစီးကြောင်းနဲ့အမီ သင်ဟာ ပေါ်ပင်ဖက်ရှင်တွေနောက်ကို လိုက်တဲ့လူငယ်တစ်ယောက် ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ အသက် ၂၄ နှစ်ကျော်ပြီဆိုရင်တော့ ပေါ်ပင်တွေနောက်ကို မလိုက်တော့ပဲ ကိုယ်နဲ့အသင့်တော်ဆုံးအလိုက်ဖက်ဆုံးဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းခွင်မှာလည်း အများလေးစားခံရပြီး စတိုင်ကျတဲ့သူဖြစ်ဖို့ ကိုယ်ဝတ်ဆင်မယ့် အဝတ်အစားတွေမှာ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုကိုစတင်လိုက်ပါတော့။ တစ်လနှစ်ခါလောက် အဝတ်အစားအသစ်တွေဝယ်ဝတ်နေမယ့်အစား အဲဒီပိုက်ဆံတွေကိုစုပြီး နှစ်လတစ်ခါလောက်မှဝယ်။ အရည်အသွေးကောင်းပြီး သင့်ကို စတိုင်ကျစေမယ့် အဝတ်အစားမျိုးဝယ်ပါ။ ၂။ ကိုယ်နဲ့မသင့်တော်တဲ့ချစ်သူကို လက်တွဲဖြုတ်ပါ ကိုယ်နဲ့မသင့်တော်တဲ့သူဆိုတာ သိသိကြီးနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်တွေကို အကုန်မခံပါနဲ့။ ကိုယ့်ဘဝလက်တွဲဖော်ဆီက ဘယ်လိုအချက်တွေလိုချင်လဲဆိုတာ ချရေးပါ။ အဲဒါ သင်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့လူပါပဲ။ အသက်အရွယ်ရလာလို့ …
ဖြောင့် စက် ဆွဲ စ ရာ မ လို ဘဲ ဆံ ပင် ပျော့ အောင် သ ဘာ ဝ နည်း နဲ့ ပေါင်း တင် နည်း…
(Zawgyi) ဖြောင့် စက် ဆွဲ စ ရာ မ လို ဘဲ ဆံ ပင် ပျော့ အောင် သ ဘာ ဝ နည်း နဲ့ ပေါင်း တင် နည်း… ဖြောင့်စရာ မလို ၊ စက်ဆွဲစရာ မလိုတဲ့ ဆံပင် တစ်ခါမှ မဖြောင့်ဖူးဘူး။ ဒါပေမယ့်ဆံပင်က ဖြောင့်ထားတဲ့ သူတွေလို ပျော့တယ် ၊ ဆံသားပြောင်တယ်၊ စင်းတယ် ။ တစ်ခြား ပေါင်းဆေး သုံးစရာလည်းမလိုဘူး။ တစ်ပါတ်တစ်ခါ – ကြက်ဥ၊ ရှားစောင်းဂျယ်လ်၊ သံလွင်ဆီ၊ ပျားရည်နဲ့ ပေါင်းတင်တယ်။ နှစ်ခွလည်း လုံးဝ မဖြစ်ဘူး …
This Month : 27695
This Year : 198921
Total Users : 494054
Total views : 2024922